Online Shopping လုပ်ကိုင်နေသူလား..? လူကြီးမင်း Online Business အတွက် ကိုယ်ပိုင် Website ပိုင်ဆိုင်ထားပြီလား..?
နိုင်ငံတော်အစိုးရ ထုတ်ပြန်ချက်အရ လူကြီးမင်း Online Business မှာ Website တခုရှိကို ရှိရတော့မှာပါ
ဒီအတွက် ဘာတွေများ ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ..? မဖြစ်မနေ ကိုယ်ပိုင် Website တွေကို ပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုပေမယ့် Website တခုကနေ ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲ..
ပိုမိုထိရောက်တဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ဖန်တီးနိုင်မယ်
ဖောက်သည် အသစ်တွေကို ပိုမို ဆွဲဆောင်လာနိင်မယ်
လုပ်ငန်းအတွက် ဈေးကွက် အသစ်တွေ ချဲ့ထွင်လာနိုင်မယ်
ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းမွန်လာပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်တွေ ပိုမို စနစ်ကျလာမယ်
ပြောင်းလဲမှုတိုင်းကို အားမာန်အပြည့်နဲ့ စိန်ခေါ်ပြီး လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Online Business ကိုချဲ့ထွင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ T-Works System မှ ကူညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ အဆင့်သင့်ပါ
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ် စီးပွားရေးဈေးကွက်စနစ်ကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ နည်းပညာအဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီး လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ Webiste ဖန်တီးမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ အပ်နှံပါ
ရရှိနိုင်သော Website Hosting Plan များ
T-Work 1GB Plan (120,000 Kyats Per Year) – 20GB SSD – 1GB RAM – Unlimited Email -Secured by Imunify 360 – Domain Name Free
လူကြီးမင်း Website အမည် (Domain Name-30000 MMK) အား အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပါ
T-Work2GB Plan (240,000 MMK Per Year) – 40 GB SSD –2GB RAM – Unlimited Email – Secured by Imunify 360- Domain Name Free လူကြီးမင်း Website အမည် (Domain Name-30000 MMK) အား အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပါ
T-Work 4GB Plan (480,000 MMK Per Year) – 80GB SSD –4GB RAM – Unlimited Email – Secured by Imunify 360 – Domain Name Free လူကြီးမင်း Website အမည် (Domain Name-30000 MMK) အား အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပါ
T-Work 8GB Plan (960,000 MMK Per Year) – 160 GB SSD – 8 GB RAM – Unlimited Email – Secured by Imunify 360 – Domain Name Free လူကြီးမင်း Website အမည် (Domain Name-30000 MMK) အား အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပါ
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံး Website Hosting Plan ကို ဝယ်ယူရန် T-Work System သို့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ
HotLine:09-965 088114 sales@tworksystem.com T-WORK SYSTEM Co.,Ltd , No (14/1), 79th Street, between 39th Street and 40th Street, Maharaungmyae Township, Mandalay.
← Advantage of E-commerce WebsitesT-WORK HOSTING PLAN →